Farmaajo oo lagu wadaa in kulan gaar ah la qaato wafdi ka socda dowladda Mareykanka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Farmaajo oo lagu wadaa in kulan gaar ah la qaato wafdi ka...
Farmaajo oo lagu wadaa in kulan gaar ah la qaato wafdi ka socda dowladda Mareykanka
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Maanta waxaa lagu wadaa in kulan gaar ah uu la qaato wafdi ka socda dowladda Mareykanka iyo Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto.
Beesha Caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii loo xalin lahaa is marin waaga ka taagan qabsoomida doorashada dalka, waxaana Wakiilka Qaramada Midoobay James Swan uu kulamo kala duwan la qaatay Madaxda maamulada iyo Madaxweyne Farmaajo.
Si klastaba kulankaan ayaa waxaa uu kusoo aadaya, iyada oo fashil kusoo dhammaaday Shirkii Madaxda dowladda, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ku yeesheen Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug.
Previous articleXalka waxaan u aragnaa in sharciga dib loogu laabto” kaddib fashilka shirka Dhuusamareeb
Next articleWasaradda Arrimaha Guddaha Galmudug oo qoraal ka soo saaray sida loo qayb-sanayo kuraasta xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Dhuusamareeb
Waxaa goor dhawayd magaalada Muqdisho ku Geeriyooday allaha u naxariistee Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo ah Ugaaska Beesha Xawaadle. Ugaaska ayaa maalmihii la...
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo caawa...